Uxinzelelo High neZilinganisi mveliso kunye nabenzi | Ukuzuza
Izixhobo: I-ASTM A105, A350LF2, A106, A312, A234, A403ASTM A182 (F304, F304L, F316, F316L, F304H, F316H, F317L, F321)
Umgangatho: I-ASME / ANSI / API / i-DIN / i-MSS-SP / i-JIS / GB
Imodeli: Ingqiniba, Tee, Coupling, Half Coupling, Cap, Plug, Bushing, Union, Out-let, Swage ingono, Bull Plug, Reducer Faka kunye neHex.
Umphezulu: Isefu okanye uMnyama (Umbala wendalo ukuba intsimbi engenasici)
Uxinzelelo: Isiphelo esine-2000/3000 / 6000LBS
Isiseko-weld weld-3000/6000 / 9000LBS
Butt weld weld - Sch40 / Sch80 / Sch160 / XXS.
Ubukhulu: 1/8 ”- 4”
Uxhulumaniso: Isiseko-Ukuwelda / Imisonto
Isiqinisekiso: I-ISO9001 CIQ ITS SGS BV CCIC TS CE
Isicelo: I-petrolium, ubunjineli bemichiza, umbane, igesi, isinyithi, ukwenziwa kwephepha kunye nekhemesti.
Imigaqo yorhwebo: FOB, Lwemipu, CIF
Iisampulu: Iisampulu ubungakanani Small simahla, kodwa intlawulo express ukuhlawulwa ngumthengi
Immimiselo yokuhlawula: I-30% T / T kwangaphambili, ibhalansi xa ithelekiswa nekopi ye-B / L, L / C xa ubona
Ixesha lokuthumela: Kwiintsuku ezingama-30 emva kokufumana idiphozithi.
Singabantu manufactuer Class 3000 zakha izixhobo umbhobho A105 ngamandla self-ulawulo amandla kumazwe.
Iimveliso zethu 100% kumazwe angaphandle kulo lonke ihlabathi kwaye ufumane igama elihle kwimarike yamazwe ngamazwe.
Ukuba izinto onomdla kuzo, ezifana intengiso intengiso izixhobo koxinzelelo oluphezulu izixhobo nceda uqhagamshelane nathi nangaliphi na ixesha. Siza kukunika impendulo kwangethuba!
Ngokutsho imfuneko sakho, sikulungele ukukukhonza kwi arcade games kunye nexabiso kukhuphiswano kuyo yonke imveliso.
Siqinisekisa inkonzo engcono kunye nokuhanjiswa okufanelekileyo ngexesha elifanelekileyo kwaye senza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nemibuzo yakho nangaliphi na ixesha.
Kulilungelo lethu ukuphuhlisa ubudlelwane beshishini kunye nobuhlobo kunye nenkampani yakho yokuxabisa ixesha elide.
Okulandelayo: Iingono zombhobho